Manantombo eny foana ny manana… | NewsMada
Manantombo eny foana ny manana…
Sazy mihantona telo volana ny an’ilay mpamily mamo nahafaty olona teny Alarobia. Sazy mihatra herintaona ny an’Iary Rapanoelina, nanokatra pejy nanohintohina olona maro tao anaty “Facebook”. Ny hitovian’ireo tranga roa ireo, samy nisintona ny fitoriany avokoa ny mpitory …
Niraradraraka avy hatrany ny fanehoan-kevitry ny maro, indrindra anatin’ny tambajotran-tserasera “Facebook”. Nahoana moa no misy fitanilana? Mazava loatra koa fa mandeha avy hatrany ny tombana ka heverin’ny maro fa niasa indray ny herin’ny vola tamin’ilay tranga voalohany. 9 tapitrisa Ar sy 11 tapitrisa Ar ho an’ny havan’ny maty? Asa aloha fa izany no feo mandeha…
Tranga faharoa, niala ny fonjan’Antanimora ka nihazo ny fonjan’ny vehivavy any Manjakandriana ilay olo-malaza Razaimamonjy Claudine. Eny, azo atao izany. Misy fangatahana manaraka ny lalàna velona, hahafahana mamindra ny voafonja miandry fitsarana. Saingy tsy izay ny tena adihevitra: raha mangataka izany avokoa ny vehivavy tanana am-ponja rehetra, mahazo ve? Mivaly vetivety toy izao ve ny fangatahana? Tsy nisy fampiasana vola na fahefana ve?
Ny manana tsy kely lalana. Mitoditodiha izay tsy mino ka mila porofo. Na ianao ilay manana na tsia… Ny manana koa tsy matoky namana. Nahoana no tsy hahitam-bahaolana mihitsy ireny “kidnapping” Karàna ireny? Sahirana ny mpitandro filaminana sa ireo voakasik’izany no tsy matoky azy ka mamoaka ny volabe takalon’ny aina? Matoa anefa misy ireny tranga ireny, misy ny te hanana tampoka ka mamely ireo manana. Manantombo eny foana, saingy misy farany ihany…